Somali – Protect Your Circle
[GURIGA JOOG OO BADBAADI NOLOSHA DADKA]
Fiiri Fiidiyayaal Dheeraad ah
si loo helo fiidiyowyo badan oo la xiriira.
Eeg Dhamaan Fiidiyowyada
[XAQIIQOOYIINKA KU SAABSAN KOOXDAADA]
Qofka caadiga ah ayaa yaqaana celcelis dhan 600 oo qof
2–4% dadka qaada cudurka COVID-19 ayaa dhiman doona
Taasi waxay ka dhigan tahay 12-24 qof oo dadka aad taqaano ah ayaa dhimanaaya hadday caabuqa qaadaan.
LIX FIID KA FOGOOW
LIX FIID KA HOOS
Dadka madoow iyo kuwa baroonka ah ayay u badan tahay inay u dhintaan cudurka COVID-19 sabab la xariirta tirada sababaha, oo ka bilboowda isir kalasooc ka jira bulshada iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ilaa heerka dhiig karkooda oo sareeya, cayil iyo sonkoroow. Waa taas sababta ay xataa muhiimad dheeraad ah u si leedahay inaad difaacdo dadka aad taqaano. Guriga joog oo badbaadi nolosha dadka.
Waxaan dhammaanteen jecelnahay inaan la joogno qoyskeena, laakiin dad badan oo caabuqa qaba ayaan lahayn astaamaha cudurka. Malahan wax astaamo ah ama calaamado ah oo muu oo muujinaaya inay jiran yihiin. Marka qof uu booqanaayo ayeeyo, oo sonkoroow qabta, booqashada ayaa geeri ku noqon karta ayeeyada.
Waa shaqadeena inaan difaacno ehelkeena. Arintaan waa ka midaysannahay dhamaanteen. Guriga joog si wax kasta oon jecel nahay oo ku dhaadano loo difaaco loona badbaadsho marka aan kasoo bogsano aafadaan. Dhammaanteen waan ka badbaadi karnaa aafada. Waxaan soo marnay waqtiyo adag hadda kahor waana ka gudbaynaa taana.
KALIGAA MA TIHID! BULSHADEENA WAXAA KA BUUXA ILO KU CAAWINAAYA.
Ma isleedahay waxaad qabtaa COVID-19? Arag astaamaha
Ma u baahan tahay cunto ama hooy? Wac 211 ama booqo Foodlink si aad u hesho cunto degdeg ah
Ma dareemaysaa amaan daro kugu haysata guriga? Wac laynta 24 saac shaqeeya ee Willow (585) 222-SAFE (7233) ama fariin qoraal udir laynkooda fariimaha ee 24 saac shaqeeya (585) 348-SAFE (7233)
Ma lumisay shaqadaada? Codso caawimaada shaqo la’aanta
Ma u baahan tahay daryeelka ilmaha? Booqo Gudigga Daryeelka Ilmaha
Xogta Gobolka New York ee Korona fayras
Xogta korona fayras ee magaalada Rochester
Xogta Korona fayras ee Degmada Monroe